Talooyin Nadaafad ah oo ku saabsan sida loo Isticmaalo Qoraallada, Qoraalka hoose iyo Qeexitaannada si aad u noqotid Arbacada Ganacsigaaga Internetka
Marka ay timaado daabacaadda webka, muhiimada sawirada lama geli karo. La qabsiga ololeyaal online ah, daqiiqad dheeraad ah ee waqtigaaga ayaa kuu keeni kara booqdayaasha rasmiga ah isla markaana soo jeedin kara akhristayaashaada dareen dhan. Ku darista sawirro muuqaal ah oo mawduucaaga ah ayaa kaalin muhiim ah ka qaadata kobcinta hawlahaaga iyo khibradahaaga. WordPress wuxuu ku siiyaa dadka daabacan shabakada fursad ay ku daraan sawirro soo jiidasho leh - employee payroll software. Sidoo kale, in la dhagaysto dhagaystayaashaaga ku filan iyada oo la adeegsanayo sharaxaada metadata, qoraallada, iyo sawirrada ayaa ahmiyad weyn u leh marka ay timaado daabacaadda websaydhka. Halkan, Jason Adler, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Semt ee Maamulaha Guud ee Macaamiisha, wuxuu ku siinayaa inaad eegto sifooyinka soo socda ee WordPress:
Marka ay timaado daabacaadda webka, qoraallada ayaa inta badan lagu soo bandhigaa muuqaalka sawirada. Si kastaba ha noqotee, meeleyntu waxay ku xiran tahay mawduuc ay adeegsato daabacaad. Mashruuc kasta oo la abuuray wuxuu u baahan yahay cadeyn gaar ah oo ka duwan kuwa kale. Marka ay timaado WordPress, xarfaha ayaa lagu daraa iyada oo loo marayo isticmaalka gaaban gaaban. Qaadashada sawirada leh qorayaasha ee tifaftire muuqaalku waa wax yar. Si aad u guurto xarfaha, waa inaad ka sameysid shuruudaha codka. Muhiimadda qoraalada lama iloobi karo marka ay timaado daabacaadda websaydhka. Ogaanshaha in aad isticmaali karto xidhiidhada HTML ee qoraallada WordPress oo sidoo kale muhiim u ah.
Tilmaame ayaa door ka ciyaara "style =" text-decoration: midna xuduudda hoose: 1px adag; href = "https: // sifo..suuq-geynta (macaamiisha), waxaad isticmaali kartaa cinwaanka si aad u raadiso macluumaadka ama sawirrada ku habboon faylasha galaaska Isticmaal fursadaha ugu sarreeya ee ku jira faahfaahinta sawirka si aad ugu darto astaamaha cinwaanka sawirada
Sub Text waa faahfaahin dheeri ah oo inta badan lagu sharraxo by daabacaadayaasha shabakadda. Hantida Hore waa in aan la sii wanaajin marka ay timaaddo suuq-geynta. Qoraalka hoose wuxuu faahfaahin ku lifaaqan oo muujiya marka sawirku ku fido inuu furmo. Halkan waxaa ah sharciyo u hoggaansan isticmaalka Sub Text on WordPress. Haddii sawirku ku lifaaqan yahay quruxda, qurxinta alt ee sawirka waa la banneyn karaa. Haddii sawirku ku lifaaqan yahay ujeedooyinka wada xiriirka, Sub Text waa in uu si buuxda u sharaxo mawduuca soo saaray daabacan
Haddii sawir laga helayo isku-xire, Hantida Alt hoosaadku waa inuu sharaxaa isku-xidhka Tarjumaadda sida soo-saaraha; sharaxaad ayaa ah qaabka aanad marnaba seegin inaad isticmaasho. Haddii mid ka mid ah booqdayaashaada suurtogalka ah ay ku soo galaan bogga boostada ku lifaaqan, booqdaha waa in ay arkaan sharaxaaddaada iyo mawduucaaga. Daabacayaasha isticmaalaya sharaxaad waxay isticmaali karaan qaabka HTML waxayna naqshadeynayaan boostooyinkooda si sahlan oo loo marin karo. Saameynaha metadata ee daabacaadda shabakada Sub Attributes, qoraalka, sharaxaadyada, iyo koobabyada ayaa ah sifooyinka kuwaas oo inta badan loo adeegsan karo wacyigeliyeyaasha shabakadda. Metadata waxay hagaajinaysaa muuqaalkaaga internetka, waxay sare u qaadeysaa waayo-aragnimadaada, iyo sidoo kale xoojinta hawlgelinta. Tusaale ahaan, ku darida sawir WordPress ah oo Google ah ayaa kaa dhigi karta inaad sare u qaadid algorithms. Soo noqoshada, booqdayaasha maxaliga ahi waxay si firfircoon ugala xiriiri karaan shirkaddaada. Fahmida muhiimada faahfaahinta lifaaqa iyo sida WordPress u isticmaalo metadata iyo qoraallada waa shuruud aasaasi ah. Faahfaahinta lifaaq ayaa sidoo kale la iska indha-tiraa oo la adeegsadaa marka ay timaado daabacaadda websaydhka. Sameeyaan sifooyinka hoose, metadata, qoraalka, iyo sharaxaada si sax ah loogu talagalay ololahaaga si ay u kordhiyaan isticmaalayaasha waayo-aragnimo iyo hawlgal